Horjooge Muuse Biixi safaaradii Somaliya ee Hargeysa ayaa laga rabaa: Xisbiga Wadani - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Horjooge Muuse Biixi safaaradii Somaliya ee Hargeysa ayaa laga rabaa: Xisbiga Wadani
Horjoge Muuse Bixi oo caqliga dhalinyarada Hargeysa iyo Burco xadaayay ayaa yiri sida keliya ee ay ku tegi karaan dhalintu Muqdisho waa inay fiiso u qaataan oo lagu dhifto baasaboorka bugta ah ee Ingiriisku sameeyay. Haddaba xisbiga Wadani oo ka jawaabayay hadalka horjooge Muuse Biixi ayaa yiri safaarada Somaliya ma aqalkiisay ku taalaa bal dadka ha u sheego.
”Yaa ku aqoonsan ma Koofurta dalka ayaa ku aqoonsan mise meel kale, waxa lagu soo direy wasiirka arimaha gudaha ee dalka ayuu yiri Maxamed Faarax Cabdi xoghayaha arimaha gudaha ee xisbiga Wadani.
”Dadka Somaliaan ma caamo ayuu u haystaa markuu leeyahay fiiso qaata. Wuxuu su’aal iska weydiiyay xuska 26 Juun oo awal Hargeysa keliya lagu qaban jirey in doorkan goboladana lagu qasbey inay qabtaan.
Si kastaba ha ahaatee dadka hoostaga maamulka horjooge Muuse Biixi ayaa baasaboorada u doonta Garoowe inkastoo la aamisan yahay inay jiraan xarumo qarsoodi ah oo Hargeysa looga qaato baasaboorka.
Dhalinta dhalatey burburka kadib oo in badan ka haajireen maamulka iskuna dhiibeen Yurub qabiilada Koofurta ayaa hadda inta ku hadhay Hargeysa iyo Burco lagu beerlaxowsan karin waan go’neyn iyo dawlad baan ahayn 1960 ku biirtey Koofurta dalka.